Izitshalo Wind impova ngezinyosi. Thobekile spring izimbali
Sizungezwe amakhulu zezitshalo, Pestryaev egqamile futhi izimbali elimnandi. Thina zijwayele kubo ukuze musa noma ucabange yokuthi ukuphila kwabo umphumela ukuxhumana amazing kanye imvelo - izinambuzane, umoya, amanzi kanye nezinyoni. Ukuze izitshalo imbewu kumele impova, ngaphandle kwalo ngeke bakwazi ukuqhubeka kwabo komkhaya nalapho isigcwaliseke ngokuphelele. Ngenxa ukuvela flora wathola izindlela eziningi ukuze uthumele impova. Ukuze impova kwaba yimpumelelo, ithole impova evela stamens awe ku inhlamba lomunye imbali okuqondene ephilayo yohlobo olufanayo.
Zilinganiselwa ku-20% zezimbali eplanethini yethu impova emoyeni. Isakhiwo izimbali zabo Lifanele salokhu inqubo, kanye isikhathi izimbali. Ezimweni eziningi, izitshalo umoya-impova bukhule entwasahlobo, kuze kube ngomzuzu lapho amaqabunga kuqala uqale eziqhakaza. Lezi izinqumo ayihlelwa ngengozi, njengoba amahlamvu kwenza kuwumsebenzi onzima impova umoya nakakhulu, kokushiya umfana ompofu yithuba kancane kakhulu ukuveza.
izitshalo umoya-impova zivame ukukhula zibe amaqoqo amakhulu, ngakho kwaba lula ukwenza umsebenzi wabo onzima. Izimbali ungazange labelwe iyiphi ezinemibala egqamile namanzi, noma iphunga eqinile zikhanga. Ziyakwazi amancane ziqoqwa e inflorescences ezinkulu. Stamens kusuka izimbali umoya-impova hang phansi ngokuvamile inezinwele ukuthi zivimbela impova fly esidlule. Futhi uketshezi ekhethekile viscous ingasetshenziswa ngalezi zinhloso. izitshalo umoya-impova une lula impova ezomile ukuma bushelelezi, umoya lalingabulawa kalula sithathe bawuthwale wakhe.
izimbali zabo - uhluke ngokuphelele umbala izitshalo emoyeni impova ngezinyosi. Sinenkosi umbala kanye flavour oqinile. Konke lokhu kuyadingeka ukuqinisekisa ukuthi izinambuzane bakwazi ukuqaphela imbali efihla esifubeni yayo uju abawabheka njengayigugu. Summer ezihlukahlukene imibala ubonisa zonke ezihlukahlukene tricks esetshenziswa izitshalo ukuheha impova izinambuzane. Entomophilous nezitshalo umoya-impova eziziphishekela imigomo ehlukene kakhulu. Yingakho abahluke ngakho e isakhiwo sabo. Iningi izimbali, okuyinto ubhekwa enhle, bheka ngakho ukuze kungenziwa kalula kubonakala kusukela emoyeni futhi kuhlukaniswe abanye.
Enye indlela zokuthola izinambuzane - ukunambitheka. izinambuzane ezahlukene njengomuntu iphunga ehluke ngokuphelele. Ngokwesibonelo, izinyosi bumblebees uthande ako amnandi ezimibalabala ezidume ngakho nabantu. Enye into - izimpukane uthanda iphunga abolile inyama. Ngakho-ke, izimbali impova yizimpukane, ngakho sizibonise ezingemnandi iphunga Putrid.
Impova izitshalo - nenkinga emangalisayo ezibalulekile, ngenxa okuyinto kukhona ecosystem yethu. Izinambuzane ukukwenza hhayi okuhle ovamile, bamane nje ngifuna umpe ukuthi uyasondla. Futhi sitshalo esiyigugu zilungele abenzele ukudla, kodwa ukubuya bayoba ibala impova emzimbeni wesinambuzane ukuze prinoslo wakhe kwenye imbali. Ngenxa yale njongo, uhlelo elihlakaniphile kakhulu futhi Amazing adalwe nemvelo. Ezinye izitshalo ngisho ukugcina bempova kalowo ngaphakathi imbali, kodwa ngeke okwanele impova. izitshalo ezahlukene impova nezinhlobo ezihlukahlukene isinambuzane ukuthi ngenxa isakhiwo izimbali zabo. Umbala nakho kubalulekile, ukuze izimbali ezimhlophe zithola impova ikakhulukazi ebusuku. Umbala kusiza amabhu ukuqaphela lwabo, njengengubo iphunga ukuthi Zikhiphela kuphela kwelanga ensimini.
No kancane ezithakazelisayo izitshalo emoyeni impova ngezinyosi. impova yazo edliwe akuyona engongi, lendlalekela nokuqhelelana kwezindawo, ukuze afeze isabelo yayo ebalulekile. Kodwa izitshalo umoya-impova izitshalo eziningi. Kodwa ngokuqinisekile abanankinga nge impova, njengoba izitshalo zabo luthathe wonke amahektha. Nomaphi landizela impova, ngokuqinisekile uthola umgomo. Endle, izitshalo umoya-impova sikhule amaqoqo, kodwa, ngeshwa, aziziningi kangako.
Self-ukuthuthwa kwempova kumane inqubo lapho ithole impova evela stamens imbali ewela pestle sakhe. Ngokuvamile lokhu kwenzeka ngisho nangaphambi izimbali evulekile. Lesi simo esiyingqayizivele sibangelwa usephoqeleke ukuba abaleke ukuhambisa ngenxa yokuthi ezinye izinhlobo zezitshalo azikwazanga ukwenza uMhloli Wemiqulu. Ngokuhamba kwesikhathi, lesi sici avikelekile, abe njalo ngemibala eminingi. Ikakhulukazi ngokuvamile atholakala phakathi self-impova izitshalo, kodwa ezinye izitshalo zasendle futhi ukukhiqiza kabusha ngale ndlela.
Nokho, self-impova asitholakali olulodwa lwento ephilayo, uzomsiza longakhipha isitshalo evamile, uma kukhona akekho ukuletha impova. Futhi izimbali self-impova kungenziwa impova indlela crossfire, uma ithuba unikezwa kubo.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi iziphi izitshalo zingumoya-impova, futhi iziphi impova izinambuzane. Kwabe sekuvela ukuthi, side by side nathi kukhona umhlaba omangalisayo lapho konke eduze oxhumene nomunye. Izwe lapho ukunyamalala izinambuzane nesincane kungaholela ekulahlekelweni kwezinhlobo eziningi. Izitshalo zinekhono elimangalisayo ukuzivumelanisa. Ezinye izimbali kungenziwa impova eyodwa kuphela zinhlobo izinambuzane, njengoba umpe yabo kufihliwe ngokujulile kakhulu. Abanye babo ukwakha isivikelo ngokumelene izivakashi engadingeki abafisa udle umpe yabo. Ngokwesibonelo, spikes noma izinwele ngeziqu imibala eminingi, okuyinto ungavumeli izintuthwane ukufinyelela okukhipha oyifunayo. Izwe isitshalo - ezweni ngokuvumelana usizo. lucky kakhulu ukuthi sakwazi ujoyine kancane ukuze ubuhle baso.